जुन बाटो बनाउँदा घुस खाए, त्यही बाटोमा गाडी प’ल्टेर नेताले ज्या’न गु’माए ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/जुन बाटो बनाउँदा घुस खाए, त्यही बाटोमा गाडी प’ल्टेर नेताले ज्या’न गु’माए !
काठमाण्डौं । सडक सञ्जालले गाउँ गाउँ जोड्ने अहिले अभियान नै चलेको छ । अझ कमसल पहाडमा डोजरले खन्दा त झन पहि’रोको जो’खिम पनि हुने गरेको छ । यस्तै घटना जाजरकोटमा भएको छ । जिल्लाको जुनिचाँदे–१ लोड्नीदेखि मजकोटसम्मको सडक निर्माण गर्दा ठेकेदारसँग नेताले कमिसन आएको आ८रोप लागेको छ ।
कमिसनको लोभमा मापद८ण्डविपरीत निर्माण भएको सडकमा भएको दु’र्घ८टनामा वडा अध्यक्ष लगायत स्वास्थ्यकर्मीको समेत ज्या९न गएको छ । जुनिचाँदे गाउँपालिकाका सर्वसाधारणले सडक कमसल रहेको भन्दै आवाज उठाउँदै आएका पनि वास्ता गरिएको थिएन । यस्तो कुरा उठाउँदा, उठाउँदै यसै सडकको एकै ठाउँमा दुई पटक जिप दु’र्घ८टना हुँदा आठजनाको ज्या८न गइसकेको छ ।
ज्यान गुमाएका परिवारका आफन्तले नेताले घुस खाएर बाटो बिगारेको र त्यसमा आफन्तले ज्या८न गु८मा’उनु परेको भन्दै आ क्रो श ब्यक्त गरेका छन् । अहिले घटनास्थल त ना व ग्रस्त भएको बुझिएको छ ।जुनिचाँदे–१ लोड्नीदेखि मजकोटसम्मको सडक निर्माण गर्दा व्यवसायीले डोजर चालकलाई इञ्जिनीयर बनाएर सडक खनेका थिए ।
अघिल्लो वर्ष मात्र खनिएको सो सडकमा जिप चल्नै नसक्ने भएपछि गाउँपालिकाले समेत केही रकम विनियोजन गरी सडकलाई केही सजिलो बनाएको थियो । जुनिचाँदे गाउँपालिका–१ औलमा बुधबार बेलुकी भे १ ज ९३५ नम्बरको जिप दुर्घटना हुँदा छ जनाको नि धन भएको थियो ।